Gidduu Lixiinsa Mootummaa Federaalaa(Dhimma Naannoo keessa) [Intervention of federal gov’t in regional affairs] | Kichuu
Posted on January 7, 2020 by kichuu_admin
Gidduu Lixiinsa Mootummaa Federaalaa(Dhimma Naannoo keessa)
[Intervention of federal gov’t in regional affairs]
Biyya Sirna Federaalizimiin bultu keessatti, Naannoleen Of danda’an Lamaa fi Lamaa ol, Mirga Ofiin of bulchuuf qaban akkuma jirutti ta’ee, Faayidaa waliiniitiif Mootummaa Federaalaa ni hundeeffatu. Mootummaan Naannolee fi kan Federaalaas Aangoo waliinii fi kan dhuunfaa ofii qabu. Akka Qajeeltootti, Mootummaan Naannoo dhimma Naannoo Ofii irratti hiree murteeffannaa guutuu qaba. Haata’u malee, Heera Mootummaa bu’uureffachuun , Maatummaan Federaalaa, haalawwan addaa, sababoota armaan gadii kana bu’uureffachuun dhimma Mootummaa Naannoo keessa seenuu ni danda’a. Kanarratti Heerri Mootummaa Federaalaa maal jedha?
1.Heera Mootummaa Keessatti Aangoo Mootummaa Fedraalaati jechuun kan tumame keessaa Heera Mootummaa ni ni tiksa, badiis irraas ni ittisa ( it shall Protect and defend the constitution). Kewt.51(1)
2. Mootummaan Naannoo Rakkoo Nageenyaa Naannoo isaa keessatti uummame to’achuu dadhabee, gaaffii yoo dhiyeesse, Mootummaan Federaalaa, Raayyaa Humna Waraanaa ni ramada. Kewt.51(14)
3. Mootummaa Naannoo Kamiyyuu keessatti Mirga dhala Namaa yeroo sarbamu fi Mootummaan Naannoo gocha sana to’achuu yoo dadhabe, Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa, kaka’umsa mataa isaatiin fi Eeyyama Mootummaa Naannoo sanaa malee, Walgahii waliinii Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataa fi Mana Maree Federeeshii waamuudhaan, murtii waliinii ni dabarsa, Murtii irra gahes, Mana Maree Mootummaa Naannoo tiif Qajeelfama kenna(Hiikoo Afaan Amaaraa). Hiikoon Afaan Ingilizii immoo—Abbootii Aangoo Mootummaa Naannoo, kan qaama dhimmi ilaaluuf Qajeelfama ni kenna jedha. Kewt.55(16)
4. Mootummaan Naannoo Kamiiyyuu, Heera Mootummaa cabsuudhaan, Sirna Heeraan diriire balaarra kan buuse yoo ta’e, Mootummaan Federaalaa akka gidduu seenuuf, Manni Maree Federeeshinii ni ajaja. Kewt.62(9)
Bu’uura Keewwa Heeraa armaan olitti caqafaman kana irratti hundaa’uudhaan,
Labsii Lakk.359/2003 bahee jira.
Akka Labsii kanaatti Mootummaan Federaalaa dhimma Naannoo keessa Lixuu kan danda’u:-
Nageenyi Naannoo yeroo boora’u Gidduu Lixuu
Nageenyi Naannoo tokkoo boora’ee jira kan jedhamu, sosochiin Nagaa fi tasgabbii Uummataa jeequ yeroo uummamu fi Qaamni Seera kabachiisu fi Seera Hiiku kan Naannichaa (the Law enforcement agency and the Judiciary of the region) akkaataa Seeraatiin to’achuu fi furuu yeroo dadhabanidha.
Naannoon gaaffii yeroo dhiyeessu—Naannoon Kamiyyuu humna ofii qabuun to’achuu kan hin dandeenye, rakkoon boora’uu Nageenyaa yeroo isa mudatu, Manni Maree Naannichaa yookiin Qaamni Hojii raawwachiiftuu olaanaan Naannichaa, karaa Ministeera Dhimma Federaalaatiin, gaaffii ofii(gaaffii Gidduu Lixinsa Federaalaa) Ministeera Muummee Biyyattiitiif dhiyeessuu danda’a.
Gaaffii kana bu’uureffachuun, Nageenya boora’e kana tasgabbeessuuf, akkuma Ulfaatina dhimmichaatti, Mootummaan Federaalaa(Ministera Muummee Biyyattiitiin hoogganamee), Raayyaa Waraana Biyyattii yookiin Poolisii Federaalaa yookiin Lamaanuu ni bobbaasa.
Humni Nageenyaa bobbaafamu fi tarkaanfiin fudhatamus, Rakkoo Nageenyaa Uummame tasgabbeessuudhaan, Seeraa fi Nagaa eegsisuuf kan wal madaalu ta’uu qaba.
Mootummaan naannoo immoo Mootummaa(Humna Federaalaa) gidduu Lixe kanaaf rakkoo nageenyaa kana dhaabsisuuf, Odeeffannoo fi deeggarsa barbaachisaa gochuufii qaba. Giddu Lixummaan kunis, rakkoon Nageenyaa uummame yeroo tasgabbaa’u fi Mootummaan Naannichaa giddu Lixummaan sun akka dhaabbatuuf gaaffii yeroo dhiyeessu hafaa ni ta’a. Mirgi Namummaa yeroo sarbamu Gidduu Lixuu
Mirgi Namummaa sarbamee jira kan jedhamu, gochi Mirga Heera Mootummaa fi seerota biroo keessatti caqafaman cabsu Naannoo tokko keessatti yeroo mudatu fi Humni Nagaa Eegsisu fi Qaamni Seera Hiiku kan Naannichaatiin to’annoo jala oolchuun dhaabsisuun yeroo hin danda’amne dha.
Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Koree dhimma kana qulqulleessu gara Naannoo sanaatti erga ergee booda, gabaasa koree sanaa dhaggeeffatee, Naannoo sana keessatti Mirgi Namummaa sarbamuun isaa yoo mirkanaa’e, Walgahii Waliinii kan Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataa fi Mana Maree Federeeshinii waamuudhaan, Mootummaan Federaalaa akka Gidduu Lixuuf murtii ni dabarsa.
Sirni Heera Mootummaa yeroo balaarra bu’u Gidduu Lixuu
Hirmaannaa yookiin Beekkamtii(Fedhii)Mootummaa Naannoo tokkootiin, Heera Mootummaa ykn Sirna Heera Mootummaa kabajuu dhabuu dhaan sochiin yeroo taasifamu, keessattuu:-
i.Diddaa/Jeequmsi Hidhannoo meeshaa waraanaatiin deeggarame yommuu taasifamu
ii. Rakkoo Naannoo biraa waliin yookiin Saba Naannoo biraa waliin mudate, karaa nagaa hin taaneen hiikuuf yaaluu,
iii. Nagaa fi tasgabbii Federaalaa jeequu
iv. Sarbamuu Mirga Namummaa mudate dhaabsisuuf, Qajeelfama Manni Maree Waliinii Federaalaa dabarse fudhachuu diduu,—
sababoonni kun yeroo mudatan Heerri Mootummaa fi Sirni Heera Mootummaatiin diriira balaarra bu’aa waan jiruuf jechuudhaan Mootummaan Federaalaa dhimma Naannoo keessa Lixuu ni danda’a.
Tarkaafiiwwan Mootummaan Federaalaa fudhachuu danda’u keessaa, Rakkoo Nageenyaa Naannoo keessatti mudate sana dhaabsisuuf, Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Federaalaa bobbaasuu dabalatee, Aangawoota Olaanoo fi Mana Maree Mootummaa Naannoo hojiirraa dhaabuudhaan, Itti waamamni isaa Mootummaa Federaalaatiif kan ta’e, Bulchiinsa yeroo hundeessuu ni danda’a.
Bulchiinsi yeroof hundeeffamu kunis, Aangawoota Olaanoo Mootummaa Naannoo , Mudamtoota fi Filatamtoota Uummataa, Poolisii fi Humnoota Nageenyaa kan Naannoo akkasumas Namoota Heera Mootummaa balaarra buusuu irratti hirmaatan Seeratti ni dhiyeessa. Mootummaan Federaalaa, sababa Aangawoonni olaanoon Naannichaa to’atamaniif hojiin kan gufatu yoo ta’e, Hojjettoota Mootummaa Federaalaa ni ramada. Bulchiinsi Yeroodhaaf Mootummaan Federaalaa hundeessus Aangoo Olaanoo Mootummaa Naannichaa bulchuu ni qabaata.
Dubbiin akkam Qeerroo ?
Bulchiinsa Mootummaa Federaalaa jala seenuu barbaannaa? Lakki. Namni fedhu waan jiru miti. Woggoota as aanaa afran shanan darban kana kessatti Sababa qabsoon oromoo gaaffi mirgaaf dimokraasi falamatu daran cimee dhufuusaarran kan ka’e Motummaan EPDRF labsiin Yeroo Ariifachiisaa yeroo adda addatti , Labsame sun Bulchiinsa Mootummaa Naannoos ta’ee, sochii qaama Kamiiyyuu, Mana Murtiis dabalatee hojiin ala nu godhee akka fedhetti nutti roorrisaa akka ture seenaa dhiyoodha, Namni dagates jira natti hin fakkaatu !
Erga Motummaan EPDRF yakkaaf cubbuu seeraaf Hera fallesse dhimma nannoo kessa seene mirgoota namummaaf dimokraasi ummataa hacuucaa ture dhiibbaa qabsootin gocha isaa goftaan kiyya Ummata jedhani dhiifama gaafatani amananii jijjiramni dhufera jedhanii dhaaddata bahani asillee rakkoon ummata oromoorratti miidhaaf dhiibbaan hiyyummaaf hacuccaan daran hammataa dhufe male hirrachuu hin dandeenye.
Ji’oota daraban kessatti woliif galteen WBO wojjin Mootummaan EPRDF taasifamuu qaba jedhame mareen jalqabame saba IFA hin taaneen addaan cituun Rakkoon jirtu osoo ummataaf hin ibsamin Hafuun isaa kan yaadatamudha. Harras rakkoo kana Maureen hiikuuf carraaqurra woraana filmaata godhatanii ummata keenya yeroo yeroon gaga’uun maal jedhama? Woraana tibbana lixa wollaggatti maqaa olaantummaa Seeraa kabachiifna jedhame labsame midyaaleen,ibsaaan,interneetiin cufame ummanni nagayaan dararamaa jiruuf imimmaan dhiiga make boo’aa jiru kana maal hajennu?
Mno oromiyaatu Afferemo?Motummaa fedraalaatu ofiin maqaa olaantummaa seraatin woraana labse? Woraanni labsame kun bu’ura heraaf sera kamirratti hundaa’ameti? Kana Mno fi Motummaan fedraalaa ibsa itti kennu qaba?
Paartileen siyaasaa,Hayyoonni,midaayaalen keenya,qerroof qareen oromoo akksumas ummanni oromoo biyya kessaaf biyya alaa jirtanu Lammii keenya Hawaasa wollaaggaatiif akka woywaatu dhaammanna!!!